Madame Maya: ahoana no nahavitan'ny olon-tsy fantatra harena tamin'ny alàlan'ny fisandohana ho zanakavavin'i Bouteflika - Jeune Afrique - teles relay
Madame Maya: ahoana no nahavitan'ny olon-tsy fantatra harena tamin'ny alàlan'ny fisandohana ho zanakavavin'i Bouteflika - Jeune Afrique
Ilay naneho ny tenany ho zanakavavin'i Bouteflika hahazoana sitraka tsy mendrika dia voaheloka tamin'ny 14 Oktobra. Miverina amin'ny saga tsy mampino.
Rehefa nidina an-tsambo ny andiana zandary jeneralin'ny Ghali Belksir (ankehitriny eo anelanelan'ny Espaniôla sy Frantsa) ny volana jolay 2019 ao amin'ny villa 143 any Moretti, toeram-pialan-tsasatra any andrefan'ny Algiers natokana ho an'ny nomenklatura, tsy azony an-tsaina akory fa ny tendron'ny mpanome vaovao dia ho sarobidy tokoa.
Ao anatin'ity trano be olona ity izay an'i Madame Maya, izay manana ny tena anarany Nachinachi Zoulikha-Chafika, mahazo vahana amin'ny harena ny zandary. Tao amin'ny rindrin'ny villa iray, ny tompony dia nitahiry dinara 9,5 tapitrisa (630 euro), 000 dolara, 30 euro ary koa volamena 000 kilao mitentina 270 tapitrisa d 'euro.
Any amin'ny firenena toa an'i Algeria, misy karama 18 (karama 000 euro) ny karama farany ambany indrindra, ity harena azon'ny vehivavy ity izay mbola tsy naheno olona talohan'ity volana jolay 120 ity dia miteraka fifangaroan'ny tsy finoana, fankahalana sy fahatezerana ao anaty ny hevitry ny besinimaro.
Vao mainka nihombo ny fahatairana satria hitan'ny Alzeriana fa ilay tovovavy resahina dia zanakavavin'ny filoha miafina Abdelaziz Bouteflika, nongotana tamin'ny fahefana tamin'ny volana aprily 2019 taorian'ny hetsi-panoherana nandritry ny telo volana izay nampidina olona an-tapitrisany an-dalambe.
Efa talanjona tamin'ny habetsaky ny harem-be tafangona nangonin'ireo lehilahy akaiky ny filoha voaroaka nandritra ny roapolo taona, dia fantatr'izy ireo fa nanafina tovovavy iray izay mazava ho azy fa tsy dia tia olona loatra ity farany.
Fifidianana filoham-pirenena tany Côte d'Ivoire: aiza ny fiarahamonim-pirenena? - ...
Ny fanehoan-kevitry ny kilasy politika taorian'ny famonoana ny ...
Zava-dehibe ny fiainana Nizeriana: misafidy ny hamafisan-toerana i Buhari manoloana ...
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny https://www.jeuneafrique.com/1059164/politique/madame-maya-comment-une-inconnue-a-amasse-une-fortune-en-pretendant-etre-la-fille-cachee -de-bouteflika /? utm_source = tanora Africa & utm_ Medium = flux-rss & utm_campaign = flux-rss-young-africa-15-05-2018
TELES RELAY 26923 Lahatsoratra 1 hevitra
Chris Brown dia nivarotra tokotanin-tsena tao amin'ny tranony Tarzana, nandefa adiresy an-tserasera - horonantsary
Fifidianana filoham-pirenena tany Côte d'Ivoire: aiza ny fiarahamonim-pirenena? - Afrika tanora
Ny fihetsiky ny kilasy politika taorian'ny famonoana mpianatra tao Kumba
Zava-dehibe ny fiainana Nizeriana: misafidy ny hamafisan-toerana i Buhari manoloana ny hetsika #EndSARS -…
Natolotr'ireo herin'ny Ordre teo am-baravaran'ny trano fonenan'i Maurice Kamto, ...